छिटो छिराउनुस् न राजा भन्दै मन्दिराले आफ्नो खुट्टा फ्या पारी - Kathmandu Online
छिटो छिराउनुस् न राजा भन्दै मन्दिराले आफ्नो खुट्टा फ्या पारी
Admin — January 5, 2018 in Uncategorized • 1 comment
म घरभित्र छिर्न लाग्दा रुबीनापनि स्कूल जान ठिक्क परेकी थिई, मैले रुबीनाको पोका समाएर खेलाउन थालें । रुबीनाले “कहाँ जानुभाथ्यो बिहानै ? कस्तो एक डोज हान्न मन थ्यो ! अब दिउँसो कहिं नजानु है स्कूलबाट आउनासाथ मलाई तपाईंको लाँडो चाहिन्छ ?” मैले उसको चाकमा प्याट्ट पार्दै भनें “तेरै त हो यो लाँडो जे गरे नि गर्लिस् त !” अनि ट्राउजरबाट लाँडो बाहिर निकालेर उसको हातमा थमाएँ, रुबीना मेरो लाँडो खेलाउँदै झुकी र लाँडोलाई आफ्नो मुखमा सक्दो छिराएर मेरो गेडा पनि खेलाईदिई । लाँडो मजाले कडा भएर ठन्किएपछी उसले मुखबाट
मेरो लाँडो खुल्ला हावामा छोड्दै भनि “बाँकि दिउँसो !” अनि जुरुक्क उठि, मैले पनि उसको स्कर्ट फर्काएर चाकबाट उसको पेन्टी साईडमा सर्काएर पुतीमा स्वाट्टै लाँडो छिराएर दुई-तिन ठ्याक हानेर रुबीनाको चाकमा जोडले थपड हानेर भनें “जाँठी मलाई सनकाएर छोड्छेस् लौ तेरो पनि त्यही हालत !” रुबीनाले मेरो मुखमा मुख जोडेर थुक साटि अनि हिडँन थाली, जाँदाजाँदै मैले भनें “तेरो साथी छे नि मन्दीरा ! त्यो त सुभद्राको बहिनी पो रै’छे है ?” “सुभद्राकोले पुगेन र अब उसको बैनीलाई ताक्न थाल्या… म छँदै छु त पुती थाप्दिनलाई… अझै तेस्को त
ब्वाईफ्रेण्ड छ उसैसँग मस्ती गरिहाल्छे नि ?” “तेसको ब्वाईफ्रेण्ड भएर के त म भनेको त मनै हुँ नि ? एकचोटी मिला न बरु तेस्लाई !” रुबीनाले मलाई माझी औंलाको सलाम गर्दै भनि “पर्*या छैन मलाई सौता पल्काउन !” अनि चाक मटक मटक पार्दै त्यहाँबाट हिँडेर गई ।केही दिनसम्म सुभद्रा हाम्रो घरमा पनि आईन, पसलमा पनि आईन । मलाई अचम्म लागिरहेको थियो सोचें “उसले अरु नै कोही भेट्टाईछे कि पुतीको प्यास मेटाउनलाई ? या घरमा जंगली पाराले चिकेको कारणले हामीसँग तर्किन खोजेकी पो हो की ?” बुबा पनि साँझ पर्नासाथ घरैमा उक्लन थाल्नुभएको थियो – बुबाको लाँडोलाई पौडी खेलाउन रुबीना जो थिई घरैमा । खैर जे होस् मलाई फेरी एकपटक सुभद्राकोमा जान मन
लाग्यो र साँझ म उसको दैलोमा पुगें । ढोका लगाईएको भएतापनि भित्र कोही थियो – सुभद्रा या मन्दीरा या कोहि पाहुना जसको कारण सुभद्रा हाम्रोमा नआएकी पनि हुन सक्थ्यो । मैले ढोका ढकढक्याँए – निकै बेर पछी मन्दीराले ढोका खोली र म उसलाई केही नभनी सरासर भित्र छिरें “के छ मैया ?” भन्दै । “दिदी त हुनुहुन्न त ?” भनेर मन्दीरा पन्छिन खोजी, मैले “चिया बनाउ न त ? म त चिया पिउनलाई पो आएको त ?” भन्दै सोझै सोफामा गएर बसें । मन्दीराले केही क्षणमै चिया बनाएर ल्याई र मलाई हातमा दिई, मैले चियाको कप समाउँदै सोधें “खोई त कहाँ गई सुभद्रा ?” “दिदी त घर जानुभा’छ ! दुई दिन पो भैसक्यो त दिदी गा’को पनि !” मैले मन्दीरालाई हेरें, उसले आजपनि पातलो टि-शर्ट लगाएकी थिई र भित्र ब्रा लगाएकी थिईन ।
मैले थुक निलेर उसलाई हेरिरहें अनि मन्दीराले भनि “छ्या नहेर्नु न त्यसरी मलाई लाज लाग्छ !” मेरो लागि त्यो नै सुनौलो अवसर थियो प्वाक्क भनिहालें “तिम्री दिदी भा’की भे खोलेर देखाईदिन्थी ?” उसले नाक खुम्च्याउँदै भनि “अँ हुन्छ काँही ? कहिं नपाएर दिदीले त्यसो गर्नुहुन्छ नि ?”चिया पिईसकेको खाली कप मैले टि-टेबुलमा राख्दै भने “पत्यार नलागे म कुनै दिन प्रमाण नै देखाउन सक्छु नि ? अनि के छ नि तिम्रो ब्वाईफ्रेण्डको खबर ?” “जे पायो त्यही नभन्नु त ? कसले भन्यो तपाईंलाई मेरो ब्वाईफ्रेण्ड छ भनेर ?” “रुबीनाले भनेकी नि ! अनि तिमी त ब्वाईफ्रेण्डसँग खुब मस्ती गर्छ्यौ रे ? कहिले काँही त हामीलाई पनि चान्स देउ न ?” अनि एउटा हातले उसको पोकालाई टि-
शर्टमाथिबाटै च्याप्प समाएर निचोरें र मेरो अँगालोमा तानेर अठ्याए । मन्दिराले मसँग छुट्टिन निकै कोशिस गर्दै थिई, फेरी हल्ला गर्न थाली भने त बरबादै हुन्छ भनेर उसको मुखमा मुख जोडेर किस गर्न थालें र उसका पोकालाई मज्जाले खेलाउन थालें, मन्दीरा मेरो बाहुपाशबाट छुट्टिन हर-सम्भव प्रयाश: गरिरहेकी थिई तर सकिरहेकी थिईन । दुई-ढाई मिनेटसम्म मन्दीराको मुखमा मुख जोडेर किस गर्दा मन्दीरा उत्तेजनामा आईसकेकी थिई । मैले मन्दीराको पोकाबाट एउटा हात हटाएर उसको ट्राउजरभित्र छिराएँ अनि पेन्टीमाथिबाटै उसको पुतीमा स्पर्श बढाउन थालें । मन्दीरा अब पानी पानी भइसकेकी थिई र उसको पुतीबाट च्यापच्याप तरल निस्केर पेन्टी रसिलो हुन थालिसकेको
थियो, मैले पेन्टीलाई हल्का साईडमा सार्दै चोर औंला उसको पुतीमा छिराईदिएँ र औंलालाई उसको पुतीभित्र नचाउँन थालें । केहिबेरसम्म मन्दीराको पुतीमा औंला खेलाएपछी मैले अनुभव गरे की मन्दिरा यतिखेर किस गर्नमा मलाई साथ दिईरहेकी थिई ।मैले मन्दीराको पुतीबाट औंला निकालें अनि हल्कासँग उसको ट्राउजरलाई तल-तल सार्दै गएँ अनि छिनमै उसलाई कमरमुनि नाङ्गो पारें, मलाई यतिमै सिमित हुनु थिएन त्यसैले उसको ट्राउजर र पेन्टीलाई भुईंमा पुर्*याएर उसको टि-शर्टलाई माथि-माथि सारेर बुब्सलाई खुल्ला हावामा तैराउँदै बुब्सलाई मजाले खेलाउन थालें । मन्दीरा अब मेरो ढाडमा नङ्ग गाड्न थालिसकेकी थिई, मैले मन्दीरालाई चुम्बन नछोडीकन सोफामा पल्टाएँ अनि उसको पोका खेलाउन छोडेर आफ्नो ट्राउजर खोलेर लाँडोलाई बाहिर निकालें त्यसपछी मन्दीराको हात समातेर लाँडोमाथि राखिदिएँ ।
मन्दीराले मेरो लाँडो जोड-जोडले खेलाउन सुरु गरि । केटी अब लाईनमा आईसकी भनेर मैले उसको मुखबाट आफ्नो मुख छुटाउँदै उसको बुब्समा पुर्*याएर निपललाई चुस्न थालें, मन्दीराले मेरो टाउकोलाई दुधमाथि दबाउन थाली । म लगातार मन्दीराको बुब्स चुस्दै उसको पुतीसँग खेलिरहेको थिएं, मन्दीराले अचानकसँग भनि “प्लिज छिटो गर्नु न अब त सहन सक्दिन…” मैले मन्दीरालाई भनें “मैंया पहिला मेरो लाँडो त चुस !” मन्दीराले “छि कस्तो फोहोरी भाषा बोल्नुभा….. नाईं नचुस्ने मलाई त घिन लाग्छ !” भन्दै अस्वीकार गरि, मैले प्रत्युत्तरमा भनें “के हो मैंया ! ब्वाईफ्रेण्डले लाँडो चुसाउँदैन कि क्या हो तिमीलाई… ?” “छि तुरी पनि चुस्छन् त ?” “मैंया ! फुच्चाफुच्चीको भए पो तुरी त ! यो त लाँडो हो लाँडो ! चुसन तिमीलाई मजा लाग्छ र भोलिदेखि तिमीले सधैं लाँडो चुस्न मन गर्छ्यौ नि फेरी ? लाँडो नै चुसेकी छैनौ भने त तिम्रो चाक पनि भर्जिन छ जस्तो छ !” “छि नचुस्ने क्या ?”
एक पटक चुसेर त हेर ! तिम्रो ब्वाईफ्रेण्डले पनि उसको लाँडो चुसिदियौ भने झन् बढी माया गर्छ, अझ चाकमा लाँडो छिराउन दियौ भने त जिन्दगीभर तिम्रो पुजा गरेर बस्छ… तिमलाई के थाहा केटाहरुलाई केटीले के गरिदिएको मन पर्छ भनेर ? कहिल्यै ट्राई गरेन तिमलाई लाँडो चुसाउन ?” “गर्न त गर्*या हो मैले मानिन नि ? त्यही भएर त उसले मलाई निकै माया गर्छ भनेको नि !” “सुन ! तिम्रो ब्वाईफ्रेण्ड बहुत चालु रैछ… यदि उसले कहिल्यै लाँडो नचुसाएको भए तिमलाई त्यसरी चुसिदेउ भन्ने आँट नै गर्दैनथ्यो ! तिमीभन्दा अगाडी उसले धेरै केटीलाई चिकेको हुनुपर्छ बुझ्यौ ! नपत्याए उसले तिमीलाई चिक्दै गर्दा एकदम ईमोसनको बेलामा सोध… उसले भन्छ… !” अनि लाँडो समाएर खेलाउँदै मन्दीराको ओंठमै पुर्*याएर सुपारी दल्न थालें, मन्दीराले भनि “यो दाईलाई मेरो मुखमा तुरी छिराउन मन छ अनि जे पनि
भन्नुहुन्छ फकाउनलाई ?” उसको अन्तिम शब्दको मुख खुलाईमा मैले मुखभित्रै लाँडो छिराईहालें र उसको टाउको च्याप्प समाएर फुस्कन नदिनेगरि भनें “मैया फेरी बिर्स्यौ तुरी हैन के लाँडो हो लाँडो !” अनि उसको मुखमा हल्का भित्र-बाहिर गराउन थालें, केहिबेर त्यसो गरेपछी मैले उसको मुखबाट लाँडो झिकेर उसको मुखमा आफ्नो मुख जोडेर चुसें । मन्दीरा मसँग छुट्टिदै भनि “छ्या कस्तो घिन लाग्दो काम गरेको !” “के को घिन नि मैया ! मेरो लाँडोको स्वाद कस्तो लाग्यो भन त ?” अनि फेरी लाँडोलाई उसको ओंठमा दल्न थालें, यसपटक मैले कुनै प्रयास नै गर्नुपरेन – च्वाप्प पारेर मन्दीराले मेरो लाँडोलाई मुखभित्र लिई र मैले उसको टाउको समातेर मुखमा चिक्न थालें ।निकैबेर मन्दीरालाई
मुखमा चिकेपछी मलाई पनि अब मन्दीराको पुती चिक्न ढिला गर्नुहुँदैन भन्ने लाग्यो उसको मुखबाट लाँडो निकाल्दै भने “ल मैया अब पुती थाप !” मन्दीरा चिकाउनमा खप्पीस भईसकेकी रहिछे, दुवै टाङ्ग फट्याएर पुतीको प्वाल देखिने गरि पल्टिई र भनि “लौ छिराउनुस् तपाईको…” मैले “लाँडो भन न मैया लाँडो ! अनि पो चिक्न पनि मजा आउँछ !” मन्दीराले आफ्नो गोप्यता भंग गर्दै भनि “मेरो ब्वाईफ्रेण्डले त केहि नबोलीकन गर्छ र छिट्टै रेष्ट गर्न थाल्छ…” “ए ! कुरो त्यसो पो ! नबोलीकन कसरी चिक्न सकेको होला त ?” मन्दीरा छट्पटिएकी थिई “प्लिज छिराउनुस् न हजुरको लाँडो मेरो पुतीमा… प्लिज चिक्नुस् मलाई… जसरी मनलाग्छ त्यसरी चिक्नुस्…” अनि मैले मन्दीराको पुतीमा
लाँडो छिराएर धमाधम चिक्न सुरु गरें । मन्दीराको मुखबाट हल्का आवाज निस्कन थालेको थियो “उहहहह …. आहह…… आहहहह….. हहह…… ओहह….. उहह…. आहहह… उऽऽऽ…फऽऽऽ….. अझै, अझै ……….. अलि छिटो……..अलि छिटो………” चिक्दै गर्दा मैले मन्दीराको बुब्स पनि बेलाबेलामा समाउँदै निचोरिरहेको थिएं र घरि घरि मन्दीराको मुखमा मुख जोडेर किस पनि गरिरहेको थिएं । चार-पाँच मिनेटसम्म मन्दीरालाई चिकेपछी मैले मन्दीराको पुतीबाट लाँडो बाहिर झिकें, मन्दीराले “उहहहह …. आहह…… किन निकाल्नुभाको लाँडो चिक्नुस् न मलाई अझै जोडले… ओऽऽऽ…फऽऽऽ…. हजुर त कस्तो एक्सपर्ट चिकुवा हुनुहुँदो रैछ… एकदम खप्पीस… केटीलाई कसरी सन्काउने भन्ने एक्सपर्ट… मजा आयो…”
मैले मन्दीरालाई सोफाबाट उठाएँ अनि सोफामै घोप्टो परेर हात टेकाउन लगाएर चाकलाई उठ्ने बनाएर फेरी पुतीमा लाँडो छिराएर धक्का मार्न थालें, मन्दीराले “उईऽऽऽ… आऽऽऽ… माऽऽऽ…. मरें म त !” भनेर मलाई झनै उत्साहित बनाईदिई ।मैले धक्काको गति झनै बढाएँ, मन्दीराले सित्कारका आवाजले कोठा गुञ्जायमान बनाउन थाली । पछाडीबाट चिक्दै गर्दा घरि म मन्दीराको बुब्स समाउने कोशिस गर्थें भने घरि उसको चाकको दुवै पुठ्ठा समाएर फट्याउँथे, मन्दीरा मलाई मजाले साथ दिईरहेकी थिई । निकैबेरसम्म मैले मन्दीरालाई चिकेपछी लाँडो बाहिर निकालें अनि मन्दीरालाई आफूतिर फर्काउँदै भनें “लौ मैया… फेरि लाँडो चुस त ?” मन्दीराले घिन लागे जस्तो गर्दै अप्ठरो मानी-मानी मेरो लाँडो मुखमा लिएर चुस्न थाली, यसपटक मन्दीराले मेरो लाँडो सँगसँगै गेडा पनि स्वत:स्फुर्तरुपमा खेलाउने तथा चाट्ने गरि, यसले मलाई पनि अरु मजा चढिरहेको थियो । मैले मन्दीराको कपालमा हात लगेर टाउको समाएँ अनि उसको मुखमा लाँडोलाई सक्दो भित्र छिराउने
कोशिस गरें, मन्दीराको मुखबाट “गुँऽऽऽ… गुँऽऽऽऽ…” मात्र आवाज आउन थाल्यो र मन्दीराको मुखबाट निकै मात्रामा र्याल बाहिर निस्केर उसको बुब्समा झर्दै पनि थियो । मैले मन्दीराले लाँडो चुसिरहेकै अवस्थामा आफूलाई सोफामा बसाउँदै मन्दीरालाई घुँडा टेकेर भुईमा बसाएर लाँडो चुसाउन थालें । प्रफुल्ल मुद्रामा मन्दीरा मेरो लाँडो चुस्नमै तल्लिन भएकी थिई ।मेरो लाँडो चुसिरहेकी मन्दीरालाई मैले गाला र कन्चटमा हत्केलाले समाएर माथी उठाएर आफ्नो मुखसँग जोडें अनि टङ्ग किस दिन थालें । यो थुक साटासाटमा मन्दीराले मलाई भरपुर साथ दिईरही । किस गर्दै गर्दा म मन्दीराको बुब्सलाई पनि सँगै खेलाईरहेको थिएँ, मन्दीराको मुखबाट आफ्नो मुख छुटाएर बुब्सको
निपललाई मैले जिब्रो र दाँतले खेलाउन थालें र केहिबेरमै मन्दीरालाई भनें “मैंया अब मेरो लाँडो माथी पुती फट्याएर बस…” मन्दीराले मेरो आदेशलाई सिरोपर गर्दै मेरो लाँडोमाथी बसी र आफैं तलमाथी मच्चिन थाली । केहिबेरमै मन्दीराले पुतीबाट पानी फाल्न सुरु गरि र उसको पुतिबाट निस्केको द्रव मेरो लाँडोको जरामा फैलिन थाल्यो, मेरो लाँडो पनि अब चरमोत्कर्षमा आउन थालेको थियो, मैले मन्दीरालाई भनें “मैंया तिमी त खलास भयौं अब फेरी चुस मेरो लाँडो…” मन्दीरा हत्तपत्त मेरो काखबाट तल झरि र फेरी घुँडा टेकेर लाँडो चुस्न थाली, जब लाँडोले पिचकारी छोड्ने बेला भयो मैले मन्दीरालाई भनें “तिमी यतिकै बसिराख…” अनि लाँडो उसको मुखबाट निकालेर छोल्न थालें र छिनमै मेरो लाँडोले मन्दीरको अनुहारमा सेतो पिचकारी छोड्न सुरु गर्यो । मन्दीराको निधार, आँखा अनि नाक र ओंठभरी सेतो बाक्लो
फुसीले सोभायमान भएको थियो । मैले लाँडोलाई मन्दीराको ओंठ बाहिर दल्न थालें र फुसीलाई उसको ओंठभरि लतपत पारें अनि बिस्तारै मन्दीराको ओंठभित्र लाँडो छिराउने प्रयास गरें, मन्दीराले गाह्रो मान्छे कि जस्तो लागेको थियो तर उसले सहजै लाँडो मुखमा लिएर चु्स्न थाली । मन्दीराको मुखभित्रै मेरो लाँडोले आफ्नो आकार गुमायो त्यसपछी मैले मन्दीराको मुखबाट बाहिर लाँडो निकालें । मन्दीराले मेरो लाँडो समाएर भनि “मेरो ब्वाईफ्रेण्डको त ठन्केको बेलामा झण्डै यत्रै हुन्छ त हजुरको त कस्तो लामो अनि मोटो… जे होस् मजा आयो ।“ “त्यही भएर त तिमीलाई स्वाद चखाएको नि मैंया…!”अनि मन्दीरालाई फेरी दुवै हत्केलाले कन्चटमा समाएर आफ्नो मुखसम्म ल्याएर
उसको अनुहारमा लागेको फुसी चाट्दै आफ्नो मुखमा जम्मा गरें अनि उसको नाकलाई पुरै आफ्नो मुखमा च्वाप्प पारेर फुसी लिएं अनि मन्दीराको मुखमा मुख जोडेर जिब्रो जुधाँए, मन्दीराले पनि मेरो जिब्रो जुधाईमा साथ दिई र मौकाको फाईदा उठाउँदै मैले आफ्नो मुखमा जम्मा गरेको फुसी उसको मुखमा खन्याएर आफ्नो मुखले उसको मुखलाई लक गरें । मन्दीराले मेरो मुखबाट मुख छुटाएर फुसी ओकल्ने चाहना गरेकी थिई, उसको प्रयास सफल भएन, उसले आँखाको ईशाराले मलाई अनुरोध गर्दै थिई, मैले आँखा झिम्काएर उत्तर दिएं । निकै समयसम्म उसको प्रयास सफल नभएपछी बाध्य भएर फुसी घुटुक्क निली । मन्दीराले फुसी निलेको भेउ पाएपछी मैले उसको मुखबाट आफ्नो मुख छुटाएँ, मन्दीरा दौडदै बाथरुम छिरि र मुख खोकल्न थाली । निकैबेरसम्म मुख कुल्ला गरेपछी मन्दीरा मेरो नजिक आई र भनि “कस्तो फोहोरी तपाईं त जबरजस्ती मेरो पेटमा पुराईदिनुभयो… कस्तो गिजीक गिजीक भईरहेको छ… त्यस्तो पनि गर्छन् त ?” “धत् मैंया तिमीले ब्लु-फिल्म हेर्दिनौ… र !” “फिल्ममा त के के गर्छ गर्छ नि ?” मैले मन्दीराको बुब्स समाएर आफुसँगै सोफामा तानेर बसाएँ ।
____म फेरी मन्दीराको बुब्स खेलाउँदै उसलाई बेलाबेलामा किस गर्न थालें बदलामा मन्दीराले पनि मेरो लाँडोमा हात सहलाईरहेकी थिई, मेरो लाँडो फेरी ठन्किएर आकार गर्नको लागि फुल्दै थियो । मन्दीराले हल्कासँग लाँडोलाई थपथपाउँदै भनि “नकचरो त फेरी उठ्न थाल्यो ?” “तिमीलाई चिकेर धित मरेन जस्तो छ ?” “नाईं म त साह्रै थाकेकी छु… बरु भोली गर्नुहोला… आजलाई पुग्यो !” मलाई पनि उसलाई धेरै जबरजस्ती गर्नु थिएन त्यही भएर भनें “ठिकै छ ! म भोलीबिहानै आउँछु नास्ता गर्ने गरि तयार भएर बस ।“ मन्दीराले मेरो कपडा उठाएर ल्याउँदै मलाई एकएक गरि लगाईदिन थाली
Pingback: छिटो छिराउनुस् न राजा भन्दै मन्दिराले आफ्नो खुट्टा फ्या पारी - Ramailo Samachar